SanDisk အလွန်အမင်း SDHC UHS-ငါ / U3 32GB Memory ကိုကတ် Up ကိုရန် 90MB / s နဲ့ဖတ်ပါ - SDSDXNE-032က G-GNCIN (နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်း) (SDSDXNE-032က G-GNCIN) - Tortlay តថ្លៃ - ကမ္ဘောဒီးယားတွင်အွန်လိုင်းလေလံ
Tortlay តថ្លៃ - ကမ္ဘောဒီးယားတွင်အွန်လိုင်းလေလံ > အီလက်ထရောနစ် > SanDisk အလွန်အမင်း SDHC UHS-ငါ / U3 32GB Memory ကိုကတ် Up ကိုရန် 90MB / s နဲ့ဖတ်ပါ – SDSDXNE-032က G-GNCIN (နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်း) (SDSDXNE-032က G-GNCIN)
SanDisk အလွန်အမင်း SDHC UHS-ငါ / U3 32GB Memory ကိုကတ် Up ကိုရန် 90MB / s နဲ့ဖတ်ပါ – SDSDXNE-032က G-GNCIN (နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်း) (SDSDXNE-032က G-GNCIN)
အထိ 8 သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးရိုက်ချက်ကိုဖမ်းခြင်းနှင့် 4K Ultra HD နှင့် Full HD ကိုဗီဒီယိုများအတွက်ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင် performance ကိုရဖို့သာမန်မှတ်ဉာဏ်ကဒ်များထက်ပိုဆပိုမြန်. အစာရှောင် files တွေကိုရွှေ့ဖို့တက် 90MB / s ဖတ်အမြန်နှုန်းနှင့်အတူ 256GB မှ 16GB ကနေသိုလှောင်မှုကိုစွမ်းရည်အတွက်ရရှိနိုင်, သာမန်မှတ်ဉာဏ်ကဒ်များထက်ပို theseEight ဆပိုမြန်
သငျသညျ 4K Ultra HD ဗီဒီယိုတွေကိုဖမ်းယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်အမြန်နှုန်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကယ်တင်တတ်၏
သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်စွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုမြန်ဆန်, shot အဘို့နှင့်ပိုမိုမြန်ဆန်လွှဲပြောင်း 90MB / s အထိ 60MB / s နဲ့ရေးအမြန်နှုန်းအထိ
Class ကိုနှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူအမြင့်မားဆုံး SD ကဒ် format နဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင် performance ကို 10 နှင့် UHS အရှိန်ကြောင့် Class3(U3) Full HD ကိုနှင့် 4K Ultra HD ဖမ်းယူများအတွက်အဆင့်သတ်မှတ်ချက် (3840 x2160p) ဗီဒီယို
အဘို့တည်ခြင်းနှင့်ကြမ်းတမ်းသောအခြေအနေများအတွက်စမ်းသပ်ပြီး; အပူချိန်ကသက်သေပြ, ရေစိမ်ခံသော, ထိတ်လန့်သက်သေပြ, နှင့်က x-ray player သက်သေပြ.
Xigmatek XAF-F1256 120mm x ကို 120mm x ကို 25mm ဝါသနာရှင် (3-တွယ်အပ်, အင်္ကျီလက်, အဖြူရောင် LED မီး)
iPhone အသစ်7ပေါင်းအားလုံးအရောင်များကို 256GB